Chelsea oo ku badisay 8 gool - BBC Somali - Warar
Chelsea oo ku badisay 8 gool
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 23 December, 2012, 19:16 GMT 22:16 SGA
Ciyaartooyda chelsea oo dabaaldagaysa.
Kooxda Chelsea ayaa jebisay rekoodh-ka gool dhalinta ee horyaalka sanadkan kaddib markii ay 8_ ku burburisay kooxda Aston Villa.
Chelsea waxay soo gashay kaalinta 3aad ee kala horreynta kooxaha iyadoo yeelatay 32 dhibcood. Waxaa ka horreeya Manchester United oo leh 43 dhibcood kaddib markii ay barbardhac la gashay kooxda Swansea.
Waxaa kaalinta 2aad ku jirta Manchester City oo leh 39 dhibcood.
4aadna waxaa joogta Arsenal 30 dhibcood.
Sir Alerobin x Ferguson, maamulaha Man United, waxaa uu yiri weliba galabta nasiib ayaan leennahay haddii uu nool yahay Van Persie oo kubbad xoog leh ay ku dhacday isagoo dhulka yaal.